काठमान्डौ स्थित बिपिन देब काफ्लेको परिवारमा ठुलो पिडा परेको छ। सबै परिवार दिन रात रुदै सबै संग सहयोग माग्दै बिपिन लाइ खोजिदिन आग्रह गरिरहेका छन्। बैसाख ३१ गते सम्पर्कमा नरहेका बिपिनको अबस्था अहिले गुमनाम छन्। अहिले उनि कहाँ छन् कसैलाई केहि थाहा छैन। सम्पर्क बिहिन भएको ७ दिन भैसक्दा सम्म पनि बिपिन अझै परिवारको सम्पर्कमा आएका छैनन् जसका कारण अहिले परिवारलाइ झन पिडा थपिएको छ । बिपिन लाइ खोजिदिन सामाजिक संजालमा समेत उनको श्रीमतीले आग्रह गरेकी थिइन।
मंगलवार बैशाख ३१ गते होटल सांग्रीला अघि अन्तिम पटक मोबाइल ट्याकिङ्ग भएको थियो। त्यसपछि उनको मोबाइल खुलेको छैन। पहिले देखि नै सबैलाई बिपिन लाइ खोजिदिन आग्रह गरिरहेका बिपिनको परिवारले मिडियामा आएर सबैलाई आफ्नो छोरा खोजिदिन आग्रह गरिएको छ। अन्तर्वार्तामा बिपिनकि श्रीमती र आमा रुदै मिडियामा सबैलाई अनुनय बिनय गर्दै पत्ता लगाउन आग्रह गरेका छन। बा ९१ प २५५० नम्बरको स्कुटर लिएर घरबाट हिडेका उनी छुट्टी लिएर बसेको दिन पनि अफिसमा काम पर्यो भनेर निस्किएका थिए। त्यपछि अहिले सम्म उनको बारेमा केहि थाहा हुन् सकेको छैन। आफ्नो श्रीमान कहा छन् कस्तो अवस्थामा होला भन्दै परिवार चिन्तामा डुबेको छ। बिपिनको परिवारले छोरालाई खोजिदिन प्रहरीलाई उजुरी दिएपनि अहिले सम्म प्रहरी पत्ता लगाउन सकेको छैन।
आफ्नो छोरा लाइ जहा भएपनि सम्पर्कमा आउन परिवारले आग्रह गरेको छ। निकै पिडामा रहेको परिवार यतिबेला सबै सोकाकुल बनेका छन। सुनौलो नेपाल संग गरिएको एक सम्बादमा परिवारले भनेको छ : छोरा हराएको धेरै दिन भैइ सकेको छ तर पनि अहिले सम्म केही पत्तो लागेको छैन। बैंक बाट पनि तीस हजार निकालिएको भेटिएको छ। हराएका बिपिनको परिवारमा अहिले रुवाबासी चलेको छ। आमा बाबु श्रीमती सबै जनाले रुदै बिलौना गर्दै छोरा लाइ जहाँ भएनी घर फर्कन आग्रह गरेको छ। तपाइँ पनि हराइरहेका बिपिन देव काफ्लेलाई खोज्न सहयोग सक्नुहुन्छ। यदि तपाईले कहिँ कतै बिपिन्लाई देखेमा परिवारलाई वा प्रहरीलाई सम्पर्क गराउन सक्नुहुन्छ।
आफ्नै मृत्युको प्रमाणपत्र बोकेर कार्यालय धाउदै रामसेवक ! भन्दैछन ' म जिउदो छु '
हत्यारा समाइदिने प्रलोभनमा पारेर बुढी आमाको खाएको पैसा उठाइदिए रबिले ( भिडियो सहित )
पृथ्वीनारायण शाहलाई युद्ध अपराधी भन्ने कि राष्ट्र निर्माता ? किन बनाइदै बिबादित ? ( भिडियो सहित )
Previous Article मोडल एलिशा राइको धमाकेदार म्युजिक भिडियो सार्बजनिक ( हेर्नुस भिडियो मा )
Next Article रवी लामिछानेले बनाउदै गरेको रास्कोट अस्पताललाई यति ठुलो सहयोग